यसरी गाउँदा गाउँदै सदाका लागि सदाका लागि बिदा भए खुसीराम ! - Everest Dainik - News from Nepal
यसरी गाउँदा गाउँदै सदाका लागि सदाका लागि बिदा भए खुसीराम !
चितवन, मंसिर ५ । भरपुरको हाकिमचोक स्थित केन्द्रिय बस टर्मिनलमा हजारौं जनसागर जम्मा भैसकेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को एकमात्र सुपुत्र स्व.प्रकाश दाहालप्रति समर्पित शोकसभा र चुनावी सभामा सहभागी जनसागर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आगमनको प्रतिक्षामा थियो ।
त्यस्तोमा उद्घोषकले भने, ‘हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ, जनवादी गायक खुसीराम पाख्रिन ।’
माओवादीका पुर्व सांसद समेत रहेका पाख्रिन मञ्चमा गए, अनि आफ्नो गोजिबाट पेनड्राईभ निकालेर प्राविधीकलाई दिए । पेनड्राईभमा ट्रयाक थियो, उनले ट्रयाक प्ले गर्न ईशारा गर्नासाथ ट्रयाक बज्यो, उनी गाउन थाले।।।
याे पनि पढ्नुस यी हुन्, दशवर्षे माओवादी जनयुद्धका मुख्य घटना
छाती खोली अघि बढ्ने अब तिमीले हिम्मत गर् !
पाख्रिनले युवलाई देश जिम्मा लगाउने गित गाएर सकेका मात्र के थिए, उनलाई अब्ठेरो फिलीङ भयो । टाउको दुख्यो भन्दै मञ्चबाट ओर्लेका पाख्रिनलाई बाम गठबन्धका नेता–कार्यकर्ताले भरतपुर स्थित नारायणी सामुदायीक अस्पताल दौडाईहाले । तर बिडम्बना, अस्पतालमा डाक्टरले भने, ‘ढिलो भैसक्यो, बचाउन सकिँदैन् !’
यसरी हृदयघातका कारण एक प्रगतिशील गायको असामयीक निधन भएको छ । बुधबार उनको पार्थिव शरिरलाई बिहान ८ बजे पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीका लागी राखिने माओवादी केन्द्र चितवनले जनाएको छ १
ट्याग्स: bharatpur, chitawan, maobadi